Pyrope garnet mineraly dia mpikambana ao amin'ny vondrona garnet - video
Ny pyrope mineraly dia mpikambana ao amin'ny vondrona garnet. Izy ireo no mpikambana ao amin'ny fianakaviana garnet hanehoana loko mena hatrany amin'ny santionany voajanahary, ary avy amin'ity toetra ity no ahazoany ny anarany avy amin'ny grika ho afo sy maso. Na dia somary tsy dia mahazatra noho ny ankamaroan'ny garnets aza izy io dia vatosoa be mpampiasa miaraka amina anarana hafa marobe, misy ny sasany diso fanakorontanana. Pyrope Chrome ary garnet Bohemian dia anarana roa hafa.
Ny pyrope madio dia Mg3Al2 (SiO4) 3, na dia matetika misy singa hafa aza misy farafaharatsiny kely indrindra - ireto singa hafa ireto dia misy ny Ca, Cr, Fe ary Mn. Ny vato dia mamorona andiam-pilaminana vahaolana miaraka amin'ny almandine sy spessartine, izay fantatry ny maro fa garnets ny pyralspite: pyrope, almandine ary spessartine. Solika vy sy manganese ho an'ny magnesium ao amin'ny rafitry ny stione. Ny vokatra, garnets goavam-pandriana mifangaro dia voafaritry ny azy ireo pyrope-almandine tahan'ny. Ny vato semi-sarobidy rhodolite dia garnet amin'ny 70% pyrope komposisyon.
Ny fiandohan'ny ankamaroan'ny pyrope dia ao amin'ny vatolampy ultramafic, matetika ny peridotite avy amin'ny akanjon'ny Tany: ireo peridotite nipoitra ireo dia azo ampifandraisina amin'ny dingam-pahavitrihana sy metamika. Mitranga ihany koa amin'ny vatam-batana metamorphic ultrahigh, toy ny ao amin'ny Dora-Maira massif any andrefana Alps. Ao anatin'izany massif io, ny pyrope saika madio dia mitranga amin'ny kristaly misy saika 12 santimetatra; ny sasany amin'ireto pyrope ity dia misy ny fomban'ny coesite, ary ny sasany dia misy ny fahatsaran'ny enstatite sy ny sapphirine.
Ny pyrope dia fahita amin'ny xenolith peridotite amin'ny fantsom-pisotro kimberlite, ny sasany dia misy diamondra. Hita tao amin'ny fifandraisana amin'ny diamondra matetika ny cr2O3 votoatin'ny 3 mankany 8%, izay manisy «violet» miavaka amin'ny kolontsaina volomparasy lalina, matetika miaraka amin'ny lalitra maintso, ary noho izany matetika dia ampiasaina ho toy ny mineraly kimberlite amin'ny faritra misy hetsika erosive. mahatonga ny kesika manondro ny niandohan'ny fantsona. Ireo karazany ireo dia fantatra amin'ny hoe chrome-pyrope, na G9 / G10 garnets.
Famantarana garnet pyrope
Amin'ny fiheverana an-tanana, ny pyrope dia tena bitika ny fanavahana an'i almandine, na izany aza, dia azo inoana fa maneho fahalemena kely sy fironana kely kokoa. Voatanisa ao anaty latabatra mifanakaiky ny fitsipi-pandrika hafa. Ny fikarakarana dia tokony ho raisina rehefa mampiasa ireo fananana ireo satria maro amin'ireo voatanisa ireo dia efa tapa-kevitra avy amin'ny pyrope namboarina synthetically. Ny sasany, toy ny gravity voafaritra tsara, dia tsy dia misy dikany rehefa mianatra ny kristaly kely iray apetraka ao anaty matotra mineraly silicate hafa. Amin'izany toe-javatra izany, ny fikambanan'ny mineraly miaraka amin'ny mineraly goavambe sy ultramafic dia mety ho fanondro tsara indrindra fa ny garnet izay ianaranao.
Ao amin'ny fizarana manify petrographiana, ny mampiavaka indrindra ny pyrope dia ireo no zaraina amin'ireo firavaka mahazatra hafa: fanamaivanana avo sy isotropy. Toa tsy dia miloko marevaka noho ny mineraly silicate hafa ao amin'ny faritra manify, na dia mihetsika kosa ny pyrope manopy mavokely mavokely mena amin'ny jiro-polarized. Ny tsy fahampian'ny fanesorana, ny morpholozy kristaly mavitrika ary ny fikambanana mineraly dia tokony ampiasaina koa amin'ny fampahafantarana ny pyrope eo ambanin'ny mikroskopia.
Pyrope garnet avy ao Pailin, Kambodza
mividy garnet pyrope voajanahary ao amin'ny magazay